GRIMME: ọhụrụ 4-ahiri PRIOS 440 ngaji-ebuli planter – Potato System Magazine
GRIMME: ọhụrụ 4-ahiri PRIOS 440 ngaji mbuli ihe ọkụkụ
в News, Akụkọ ụlọ ọrụ, Omume / Etu
PRIOS 440 na-arụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ n'ọhịa
Maka oge 2023, GRIMME na-ewepụta ihe ọkụkụ nke mbụ nwere ahịrị anọ nwere obosara njem nke na-erughị 4m yana nkwado ụdị EU zuru oke. Na mgbakwunye, PRIOS 3 abụghị naanị webatara ihe ọhụrụ, ọkachasị maka hitch na riger, kamakwa nyekwara ihe niile achọrọ maka iji mmepe na Precision na Smart Farming.
Ohere nchikota dị iche iche
Site n'enyemaka nke gooseneck drawbar nke nwere etiti etiti na oghere dị iche, enwere ike ijikọta onye na-akụ osisi na ngwa ọrụ ugbo ọ bụla na-arụ ọrụ (dịka rotary harrow, cutter).
Usoro ibuli elu dị iche iche na-enye ohere mgbanwe ngwa ngwa nke ngwa ọrụ ịkụ ihe dị iche iche. A na-eme njikwa ihe omimi nke ime ihe ọkụkụ nke ala n'adabereghị na onye na-akụ ihe, nke mere na a na-edobe omimi ihe ọkụkụ mgbe niile.
Echiche ọhụrụ nke nduzi omimi
Na-ejigide omimi nke diski fatịlaịza fatịlaịza, ndị na-emeghe furrow, diski harrows, yana ngwaọrụ na-akpụ akpụ a na-eme n'adabereghị onwe ha. 4 nlele wiil n'ihu igwe na 2 ultrasonic sensọ n'ihu nke riji mbụ debanyere omimi na-arụ ọrụ ma si otú ahụ hụ na kacha omimi nduzi na ọbụna ntoputa.
Ndakọrịta zuru oke na ngalaba Control
Iji chekwaa ụgwọ ọrụ mmepụta ihe, onye na-emepụta fatịlaịza, akụrụngwa tank yana ndị na-akụ osisi nwere ike ịgbanye n'adabereghị onwe ha na nke ọ bụla n'usoro site n'ịgbanwe njikwa nke ngalaba (iji Multiboom otu nkwụsị ọrụ nkwụsịtụ). N'ihi ya, mfu n'ihi iwebata nri na gburugburu ebe obibi na-ebelata nke ukwuu, karịsịa mgbe ị na-akpụ tramline ma ọ bụ mgbe a na-akụ mkpụrụ n'ebe ndị yiri wedge. Site na ịgbanyụ ihe nkedo mita na ngwakọta ngwakọta na ahịrị ndị ọ bụla, a na-ewepụ nsị nke fatịlaịza na tank.
Ugwu ohuru ohuru ohuru
Iji mee ka mkpọda nwere elu dị larịị, enwere ike ijikọ mkpọmkpọ mkpuchi nke ejiri rọba (PE) na efere dị elu ma ọ bụ grid rollers maka elu ugwu rụrụ arụ. Na nke mbụ, a na-emejuputa nhazi nke ridge dị ka nchikota nke ridges top plates na lattice rollers. “Hybrid Ridder” pụrụ iche nke ụdị ya na-eme ka mkpọda nwere akụkụ akụkụ kwụsiri ike ma dịkwa larịị yana oke elu elu. N'ihi ya, a na-ejikọta abamuru nke mgbanaka na-akpụ akpụ na ndị nke lattice roller. Ntughari na ngbanwe nke "ngwakọ ridge nke mbụ" ga-ekwe omume n'ọhịa na-enweghị iji ngwá ọrụ, na-ekwe ka ọkpụkpụ nke mbụ na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ ala na ihe ndị ahịa chọrọ. Iji mee ka mmịpụta nke mmiri dị n'ime ala (ikike mmịpụta mmiri) ma gbochie mbuze nke ala, enwere ike iji usoro TerraProtect kwadoro nke mbụ.
PRIOS 440 nwere nkwado okporo ụzọ 40 km / h
Ogologo njem n'okporo ụzọ na-erughị 3,00 m N'ọtụtụ mba Europe, ụgbọ ala nwere obosara karịa 3,00 m chọrọ ikike okporo ụzọ pụrụ iche. Dị ka a na-achị, obosara njem nke ndị na-akụ osisi 4-ahịrị nke nwere oghere nke 75 cm dị n'etiti 3 na 3,30 m PRIOS 440 nwere oghere ahịrị 75 cm nwere nhọrọ nke nwere axles telescopic abụọ, na-eme ka o kwe omume maka nke mbụ. oge iji belata obosara na-arụ ọrụ site na 3,30, 3,00 m maka obosara njem nke na-erughị 440. Akụkụ ndị na-arụ ọrụ nke igwe, dị ka efere ntụziaka, elu ugwu ugwu na ndị na-ekpochapụ egwu, na-agbanye n'akụkụ akụkụ nke igwe. Site na nkwado ụdị EU zuru oke, PRIOS XNUMX nwere ike ibuga n'okporo ụzọ na-enweghị ikike pụrụ iche, na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji na ugbo ndị ọzọ ma ọ bụ n'èzí obodo eji.
Sistemụ vidiyo SmartView yana njikọ na myGRIMME
A na-eduzi PRIOS 440 nke ọma site na ISOBUS dị ka ọkọlọtọ. Enwere ike ime nke a site na iji njikwa aka ISOBUS traktọ ma ọ bụ njikwa aka CCI 800 ma ọ bụ CCI 1200 ISOBUS. SmartView nwere ihuenyo mmetụ 12 ", mbugharị, Live Slow Motion, nnyefe onyonyo ozugbo site na Wi-Fi, Visual Protect PRO na ikike. ka ịdekọ ihe oyiyi na-enye nkọwa dị mma nke ọrụ igwe niile. Site na ijikọ na myGRIMME, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe data igwe na ịtụ data site na agrirouter site na iji sistemu ozi nke Farm Management.
Echiche akụkụ nke PRIOS 440 ọhụrụ na ụlọ Grimme dị na Kappeln
Tags: PRIOS 440onye na-akụ ihe n'azụNgwa GRIMME
Productsme ka ihe ndị dị ndụ pụta dị mma ga-enye ohere ka ọ daa site na nguzogide nke ahụhụ ụmụ ahụhụ
Anyị na -akpọ gị oku webinar Omia